Do Kwon wepụtara atụmatụ ya maka Terra - CoinWorldMap
Do Kwon na-ewepụta atụmatụ ya maka Terra
Mee 14, 2022 Bitcoin, Ethereum
Terra's Blockchain Hell Week na-aga n'ihu n'ihi na ọ ka dị anya site na itinye ya na dollar na mkpụrụ ego obodo ya agbadala na efu. Agbanyeghị, na Wednesde, onye nchoputa Terra Do Kwon tụpụtara ụzọ ụzọ iji weghachi peg UST.
Onye nchoputa Terra Do Kwon weputara atumatu iji weghachi UST parity na dollar. Ọ na-abịa 19 awa mgbe onye nchoputa mesiri ndị investors obi ike na Twitter na ọ dị nso ikpughe atụmatụ ego iji dozie nsogbu ahụ.
Kwon tweeted: "Nanị ụzọ dị n'ihu bụ ịkwalite ihe nkwụnye ego nke chọrọ ịpụ tupu UST amalite ibili." Kwon kwuru na nzọụkwụ mbụ bụ imejuputa atumatu iji bulie ikike ịwepu UST iji kpuchie nnukwu iwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Tweet Kwon na-agụ: "Nke mbụ, anyị na-anabata atụmatụ obodo 1164 iji mee ka ọdọ mmiri dị elu site na 50M ruo 100M SDR ma belata PoolRecoveryBlock site na 36 ruo 18. Nke a ga-abawanye minting si $ 293M ruo $ 1200M ... UST ngwa ngwa."
Kwon gosipụtara na, ihe niile a tụlere, “Ngosipụta UST (ya bụ, ụgwọ ọjọọ)” kwesịrị iji nwayọọ nwayọọ belata ruo mgbe eweghachiri mkpọ ahụ. Jiri na dollar. Kwon kwetakwara na tweet ya na atụmatụ a chọrọ ga-efu ndị na-etinye ego nke LUNA nnukwu ego, mana mesiri ha obi ike na ndị otu ahụ ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ n'iwebata isi obodo n'èzí na gburugburu ebe obibi iji mee ka usoro a dị ngwa.
Na mgbakwunye, onye guzobere Terra kpughere na netwọk ahụ kpebiri inye TerraUSD ihe nkwekọrịta. N'ụzọ doro anya, mkpebi siri ike a nwere ike ịpụ n'ọhụụ mbụ Kwon nke imepụta mkpụrụ ego kwụsiri ike nke Bitcoin na-akwado. Tụkwasị na nke a, ọ dịghị ihe doro anya ma a ga-ejikọta stablecoin n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ akụkụ ụfọdụ. Agbanyeghị, Kwon mesiri ndị obodo LUNA obi ike na otu a nọ na nke a ogologo oge yana na nsogbu dị ugbu a bụ naanị ihe ndọghachi azụ nwa oge.
Bitcoin na Ethereum yiri ka ha na-alaghachi n'ụkwụ ha
Ma LUNA na UST nwetara ọdịda dị nkọ na Wednesde, na stablecoin na-agbada na $ 0,15 n'otu oge. Ka ọ dị ugbu a, mkpụrụ ego Terra LUNA, bụ nke kụrụ ihe dị elu nke $ 119 na mbụ n'afọ a, na-ere ahịa n'akụkụ akara $ 0,0001, na-ebute ọdịda na-awụ akpata oyi nke kpochapụrụ uru ya kpamkpam.
LUNA gbadara 99% n'ime awa 24 gara aga yana 97,48% n'ime ụbọchị asaa gara aga. Ọnụ ahịa ahịa LUNA nwekwara nnukwu mfu. N'okpuru 91%, ihe onwunwe ahụ dara n'azụ 10 cryptocurrencies site na isi ahịa ahịa, ebe ọ na-anọ kemgbe ọtụtụ afọ, ma ugbu a na-anọdụ na 213 na ahịa ahịa nke $ 787 nde.
N'otu aka ahụ, UST ka dị anya site na peg dollar, na-ere ahịa na gburugburu $0,16. Ka ọ dị ugbu a, n'aka nke ọzọ, Bitcoin na Ethereum na-egosi ntakịrị mmụba: Bitcoin na-ere ahịa n'elu ọnụ ahịa $ 30, elu 050%, na Ethereum na-ere ahịa n'akụkụ ọnụ ahịa $ 4,62, elu 2100%.
Mbelata na ahịa crypto na-eduga na ọdịda nke NFT